Ilay Dianao Mahafinaritra Mody any an-trano
Rehefa mampiasa amim-pifaliana ilay sarintany nomen’ny Ray be fitiavana ho an’ny dia ataonareo ianareo dia hamoaka ilay hery avy any ambony anananareo ianareo.
Voninahitra ho antsika androany hariva ny fanatrehan’ny Filoha Thomas S. Monson eto, izay mpaminany malalantsika. Ry Filoha, mivavaka ho anao foana izahay.
Ry anabavy malala, misaotra tamin’ny hira sy teny voalahatra. Tena manentana ny fanahy tokoa ny zava-drehetra ary mety ho an’izao fotoan’ny Paska izao, ilay fotoana masina izay ankalazaintsika amin’ity faran’ny herinandro ity.
Fifaliana tokoa ny miaraka aminareo ry tanora rahavavy sarobidy, miaraka amin’ireo reny sy ireo mpitarika anareo mahafinaritra. Manana fanahy mamirapiratra sy tsikitsiky mamindra ianareo. Azo antoka fa miahy anareo ny Tompo ary mitsinjo am-pitiavana anareo avy any an-danitra any.
Tany Zwickau no nahalehibe ahy, izay tao Alemana Atsinanana fahiny. Fony aho 11 taona dia nianjadian’ny fitsikilovana tsy nisy fiafarany ny raiko tamin’ny naha mpiendaka tamin’ny vondrona ara-pôlitika azy, ary nahatsapa ny ray aman-dreniko fa ny hany safidy tsara ho an’ny fianakavianay dia ny mitsoaka any Alemana Andrefana. Tapaka ny hevitra fa ny drafitra azo antoka indrindra dia ny fitsoahana amin’ny fotoana samihafa ary amin’ny fandehanana amin’ny lalana tsy mitovy izay miankandrefana, ka havela ny fananana rehetra.
Nisafidy ny lalana haingana indrindra nankany Berlin ny raiko noho izy tena notandindomin-doza. Nianavaratra kosa ny lalan’ireo zokiko lahy, ary samy nikaroka ny lalany manokana nitondra niankandrefana. Ny anabaviko—izay mety ho nitovy taona amin’ny maro aminareo eto ankehitriny—niaraka tamin’i Helga Fassmann, mpampianatra azy tao amin’ny Zatovovavy sy olona sasany hafa dia nandray fiarandalamby izay nandalo kely tany Alemana Andrefana. Nomen’izy ireo vola ilay mpamoha varavarana mba hamoha ny iray amin’ireo varavarana ka rehefa nandia ny sisin-tanin’i Alemana Andrefana ilay fiarandalamby dia nitsambikina teny am-pandehanana izy ireo mba hahazoany fahafahana.Tena nidera ny herimpon’ny anabaviko aho.
Izaho kosa no faralahy ka nanapa-kevitra ny reniko fa hamakivaky ireo tendrombohitra mitomandavana izay manasaraka ireo firenena roa ireo izaho sy izy. Tsaroako izy nanomana sakafo atoandro toy ireny hoe handeha hihanika na hitsangatsangana any an-tendrombohitra ireny izahay.
Nandeha fiarandalamby araka izay faran’ny lavitra vitanay izahay ary avy eo nandeha an-tongotra nandritra ny ora maro, nihananatona hatrany ny sisin-tanin’i Alemana Andrefana. Voara-maso tanteraka ireo sisin-tany ireo kanefa nanana sarintany izahay ary fantatray ny fotoana sy ny toerana tsara hiampitana. Tsapako ny fitaintainan’ny reniko. Dinihiny tsara ilay faritra mba hijerena sao dia nisy nanaraka izahay. Toa nihanalemy ny tongony sy ny lohaliny isaky ny nanao dingana iray. Nampiako izy nilanja ilay harona feno sakafo, antontan-taratasy manan-danja ary sarim-pianakaviana teo am-pihanihana ilay havoana farany sady avo. Tena nieritreritra izy fa efa dify ny sisin-tany kosa izahay teo. Rehefa tsapany fa tsy misy zavatra atahorana dia nipetraka izahay ary nanomboka nihinana ny sakafom-pitsangantsangananay. Azoko antoka fa izay izy vao mba nahazo aina kely tao anatin’izay andro izay.